कथा : जुना क्रमश: ५ – Pundary Aryal :: Nepali Literature Portal
चक्रपाणीले आफु संगै आएको साहिलो (भरिया) लाइ लिएर आफ्नो घरतिर ओरालो झरे । बस जुनालाइ के चाहियो कान्छो भिनाजु अर्थात उनैको पती घरबाटै बिदा भएपछी पिन्जराबाट चरी मुक्त भए जस्तो लाग्यो । टाउकोमा थिचिएको जाँतोको बोझ उत्रिएर हलुङ्गो भएको अनुभव गरिन, बाल मश्तिश्क परेको यो उनको लागी दुर्घटना हो भन्न मिल्छ, आजको जमानामा । उनको मुहारमा अरु चमक थपियो । कहाँ दुलही बनाएर के कस्तो पुजा गराए अनी ससुरा जेठाजु भन्दै ढोगाए, उनलाई सपना जस्तै लागेको थियो । दुलाहा दुलहीको पुतलीको खेल खेलेकी बालिका जोडी नै भन्न नमिल्ने संग बिहे, के थाहा उनलाई बिहे यस्तो हुन्छ ? भनेर । न उनलाइ यस कुराको ज्ञान नै थियो ।
न त यति जटिल कुरा सोच्न सक्ने, न बिचार गर्न सक्ने क्षमता नै रहन्छ बाल मष्तिष्कमा । बस उनलाई लाग्थ्यो, अब म घर आउन पाए । बाबा आमाको घर, यहि त मेरो घर हो ? अब मलाइ कहिल्यै पनी नपठाउनुस, भिनाजुकोमा म जादै जान्न भन्दै बाबा आमाको अगाडी खुट्टा बजारिन । आमाले जुनाको गाला मुसार्दै, अब त जान्ने छोरी तिनका घरमा । बाउतिर आँखा तर्दै यो बिहे गरेर छोरीलाई त जिउदै मार्नु भयो हजुरले त !! भन्दै गुनासो गरिन । गाउँलेले सम्मान गर्ने मामलाबाजेले केहि नबोली मुन्टो तल झुकाए ।
जुनाले आफ्नी सानी बैनी झुमालाई लिएर बाहिर केटा केटि जमा गरेर खेल्न लगिन ।
आइजु आइन डोली
पापा ल्याइन सोली
बाउ माम सुपुक्क
बिरालो भन्छ म्याउ म्याउ
अगुल्टो भन्छ उछिट्याउ
ठुलामान्छेले उनलाई अब बिहे गरेपछि यिनी केटाकेटि जमा गरेर खेल्न हुन्न है, जुना ! भनेर हप्काए । तर उनलाई बिहे न सिए, मेरो बिहे भएकै छैन , बिहेमा बाजा बजाएर हुन्छ, त्यो त पुजा हो बाइ । भन्दै झन् उफ्रिदै नाच्न थालिन ।
यति यति पानी, गंगै रानी !
बसी बसी भरु भने
घैला भन्दा सानी
उठी उठी भरु भने
कम्मर दुख्ने बानी !
जुनाको बालपन हठ बालपन सुलभ, उनको मुखमा स्पष्ट देखिन्थ्यो । न उनमा बिहेको कुनै आभाष थियो । न त ब्यबहारमा । बा आमाको काखमा रमाएर उनको दिनचर्या बित्दै जादै थियो । समयले बिस्तारै अगाडी लैजादै थियो । आमासंग भान्छा पकाउने देखि लिएर, खेतमा रोपाइँ गर्न, घाँस, दाउरा समेतमा उनले संग संगै साथ दिएकि थिइन् । आमाले पनी यो छोरी घर गए पछि मलाइ कती सम्झना भैरहने छ । यसले त मेरो सबै काममा सघाएकी छ । मामला बाजेसंग कुरा गर्दथिन ।
मामला बाजेको खेतिपाती गरिदिने मान बहादुर थापामगरको घर जुनाको
आफ्नै घर जस्तो लाग्थ्यो । उनकी छोरी मनमाया संगैकि भएकी हुनाले पनि मान बहादुरले आफ्नी छोरीलाई जस्तै माया गर्दथे । जुना प्राय मनमाया संग खेल्न पुगेकी नै हुन्थिन । मनमाया संगै खाने, खेल्ने र कहिले काही त्यहि बस्न खोज्थिन । बिहे भएको भनेर हाम्रो घरमा खान मिल्दैन नानी ।
अब तिम्रो त बिहे गरेर कर्म चलिसक्यो ! भनेर मान बहादुरले भनि रहन्थे । तर जुनालाई केहि मतलब हुन्थेन । मनमायाले जे खान्थी उनि त्यहि खान्थिन । मगरको घरमा जाड पनी बनाइ राखेका हुन्थे । मनमायाले सुटुक्क कटौरामा लिएर आइ दुवै जनाले खान्थे । मनमायाले बिठ्याई गर्न पनि सिपालु थिइन् । थाहा नपाइकन सुटुक्क केहि न केहि गरिहाल्थिन र जुनाले गरेको भनेर लगाउथिन । उनका बाबुले जुनाले भनेपछि गालीबाट बच्थिन।
एवं रितले गर्दै दिनहरु बितिरहेका थिए । जुना चौध पुगेर पन्द्र बर्ष टेकेकी मात्र थिइन् । हर्लक्क बढेकी जुना उमेर सानो भए पनी बयस्क जस्ती देखिन थालिकी थिइन् । यता माम्लाबाजेले छोरीलाई पठाइदिने हो कि ? भनेर सोचिरहेका थिए । बजैले भने पन्द्र बर्ष नकटीकन पठाउन मैले मनासिब देख्दिन । अझै सानै छ । त्यसले घर गैर सुख पाउने हैन । सबै काम यहि छोरीको जिम्मा हो क्यारे ! अझै बाल्खै छ क्या सरिर देखेर भएन ? बा आमाका यस्तै कुरा जुनाले सुन्न थालिकी थिइन् ।